Song 4 | Mal1865 | STEP | Endrey, tsara tarehy ianao, ry tompokovavy havako! Endrey, tsara tarehy ianao! Ny masonao dia voromailala eo amin'ny fisalobonanao ; Ny volonao dia tahaka ny osy andiany, izay mandriandry eny an-kilan'ny tendrombohitr'i Gileada.
1 Endrey, tsara tarehy ianao, ry tompokovavy havako! Endrey, tsara tarehy ianao! Ny masonao dia voromailala eo amin'ny fisalobonanao ▼
▼ Na: volonao milantolanto
; Ny volonao dia tahaka ny osy andiany, izay mandriandry eny an-kilan'ny tendrombohitr'i Gileada. 2 Ny nifinao dia tahaka ny ondrivavy andiany efa voahety, izay miakatra avy eo amin'ny fampandroana; Samy kambana avy ireo, fa tsy misy tsy mana-namana. 3 Tahaka ny kofehy jaky ny molotrao, ary mahafinaritra ny vavanao ▼
▼ Heb. fitenenanao
; Tahaka ny hasin'ampongaben-danitra ny takolakao eo amin'ny fisalobonanao ▼
, 4 Ny vozonao dia tahaka ny tilikambon'i Davida, natao ho trano fihantonam-piadiana; Ampinga arivo no voahantona eo, dia ny ampinga rehetra an'ny lehilahy mahery. 5 Ny nononao roa dia toy ny diera kambana mbola tanora, izay homana eny amin'ny lilia. 6 Mandra-pangatsiatsiaky ny andro, ka efa hilentika ny masoandro ▼
, dia handeha aho ho any amin'ny tendrombohitry ny miora sy ny havoan'ny ditin-kazo mani-pofona.
7 Tsara avokoa izato bikanao izato, ry tompokovavy havako; Tsy misy kilema ianao. 8 Hiaraka amiko avy any Libanona ianao, ry ampakariko, eny, hiaraka amiko avy any Libanona, hitazana eny an-tampon'i Amana, eny an-tampon'i Senira sy Hermona, eny an-davaky ny liona, eny an-tendrombohitry ny leoparda. 9 Efa lasanao ny foko, ry havako ▼
ampakariko, efa lasanao ny foko tamin'ny masonao an-ila sy tamin'ny rojo anankiray amin'ny vozonao. 10 Akory ny hatsaran'ny fitiavanao, ry havako ▼
ampakariko! Akory ny hatsaran'ny fitiavanao! eny, tsara noho ny divay! Ary ny fofon'ny menaka manitrao dia mihoatra noho ny zava-manitra rehetra! 11 Mitete tantely toy ny avy amin'ny tohotra ny molotrao, ry ampakariko; Tantely sy ronono no ao ambanin'ny lelanao, ary ny fofon'ny fitafianao dia tahaka ny fofon'i Libanona. 12 Saha voahidy ny havako ▼
▼ Heb. anabaviko
ampakariko, loharano voahidy, fantsakan-drano voaisy tombo-kase. 13 Hianao no saha anirian'ny ampongaben-danitra tsara voa, sady misy kofera sy narda, 14 Eny, narda sy safrona, veromanitra sy havozomanitra sy ny hazo misy ny ditin-kazo mani-pofona rehetra. Miora sy hazo manitra ▼
▼ Heb. ahalota
Mbamin'ny zava-manitra tsara rehetra; 15 Loharano ao an-tanimboly ianao, loharano miboiboika, ary renirano kely avy any Libanona.